स्थायी समितिमा गाेकर्णकाे प्रश्न – मलाइ किन हटाइयाे? – Hotpati Media
स्थायी समितिमा गाेकर्णकाे प्रश्न – मलाइ किन हटाइयाे?
२ पुष २०७६, बुधबार १८:३८ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बैठकमा भने, ‘मन्त्रीबाट हटाउनुपहिले पार्टीले सामान्य जानकारी दिएर बाटो खाली गरिदिन भनेको भए सहज रुपमा स्वीकारिन्थ्यो। तर, अयोग्य जस्तो गरी हटाइयो। यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ।